A na-akwado ngwa ahịa na usoro a na-achọsi ike, yana mkpụmkpụ ọnụahịa aluminom dị ike
A na-emepụta ọtụtụ carbon dioxide n'oge a na-emepụta aluminom electrolytic. Nke a adabaghị na mmụọ nke "nnọpụiche carbon" na "ikuku carbon" nke ndị ndu China tụpụtara n'afọ gara aga. N'ọdịnihu mgbe nchedo gburugburu ebe obibi na-abawanye uru, ọ ga-emetụta ọganihu nke ikike mmepụta electrolytic aluminum. N'otu oge ahụ, ụlọ ọrụ ume ọhụrụ na-enwetawanye elebara anya n'ihi nchedo gburugburu ebe obibi. Ihe ndi ozo n’acho inweta aluminom abawanyewo. Ngwaahịa dị ala ugbu a na-egosikwa na nnyefe na usoro chọrọ nke ahịa aluminom dị mma. A na-atụ anya na mgbanwe nke mkpụmkpụ nke ọnụahịa aluminom ga-esi ike, ọ na-atụ aro ka ị attentionaa ntị na-achịkwa atumatu metụtara njikọ ndị njikwa nakweere iji hụ na ọkọnọ ma kwụsie ike.
Onu ogugu griin haus bu nke anaputara n'oge emeputa aluminom electrolytic, na atumatu machibidoro mmeputa aluminom electrolytic.
Na mba m, a na - emepụta ọtụtụ aluminom electrolytic site na ọgbọ ike ọkụ. Ọgbọ ike ọkụ na-emepụta ọkụ eletrik n'ozuzu site na ọkụ ọkụ (854, -2.00, -0.23%), na kol na-ekpo ọkụ ga-emepụta ọtụtụ carbon dioxide n'oge usoro ọkụ, nke na-emerụ gburugburu ebe obibi. Na-akpata nsogbu. Ka ọ dị ugbu a, ikike nrụpụta aluminom nke mba m na-elekwasị anya na Shandong, Inner Mongolia, na Xinjiang. Ọnụ ọkụ eletrik dị ala na Northwest adọtala ọtụtụ ikike mmepụta electrolytic aluminum iji nyefee n'oge gara aga. Agbanyeghị, n'okpuru mmetụta nke "nnọpụiche carbon" na "carbon peaking", ewepụtara ọtụtụ njikwa njikwa ike n'ọtụtụ ebe, dịka Inner Mongolia, Ningxia, Guangdong, wdg, nke ga-ebelata ọsọ nke aluminom electrolytic ike mmepụta. N'oge na-adịbeghị anya, "ọkwa maka ịme ka njikwa nke" abụọ dị elu "rụọ ọrụ nke General Office of the People's Government of Shandong Province nyere kwuru n'ụzọ doro anya na a ga-arụ ọrụ ọhụrụ" abụọ dị elu "na Mbelata ikike mmepụta, oriri coal , oriri ike, carbon umu anwuru, na pollutant anwuru ga-nditịm na-emejuputa atumatu. Usoro ozo. Uzo ozo maka mbelata kwesiri ibu ihe ntukwasi obi, onu ogugu, na enwere ike leba anya, ma obu ha agaghi eji ha dika uzo ozo. N'ihe banyere mbelata ikike, ọrụ electrolytic aluminum adịghị ihe na-erughị 1: 1.5. N'ihe banyere mbelata ike oriri, ngbanwe ngbanwe nke aluminom electrolytic abụghị ihe na-erughị 1: 1.5. N'ihe banyere carbon emission Mbelata nnọchi, electrolytic aluminom abụghị ihe na-erughị 1: 1.5. Ọtụtụ ebe amalitela iwusi "njikwa abụọ" ike, a ga-emetụtakwa mmepụta nke ikike mmepụta electrolytic.
Site n'echiche nke ọnụahịa, ọnụ ahịa alumina na ụgwọ nke ọkụ eletrik bụ isi ihe ndị dị mkpa maka aluminom electrolytic, na ụgwọ abụọ ahụ nwere ike ịkọ ihe dịka 35% nke ọnụahịa mmepụta nke aluminom electrolytic. N'ihe gbasara alumina, ebe ọ bụ na mgbanwe mgbanwe-ọkọnọ anaghị etinye aka alumina, ọ gbasaghị mmụba nke ikike mmepụta alumina. Otú ọ dị, ọnụahịa nke ugbu a nke electrolytic aluminom dị elu, na ọchịchọ maka alumina sitere na electrolytic aluminum smelters nke nwere ike ịmepụta bụ ihe siri ike. Yabụ, ahịa alumina dị ugbu a n'ọnọdụ ntakịrị ego, ego iji sonye na alumina pere mpe, yabụ alumina ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ na ọkwa dị ala na obere oge.
N'ihe banyere icheku ọkụ, ọ bụghị naanị kol na-achọ ọkụ ka achọrọ iji mepụta aluminom electrolytic, ma ugbu a mba abanyela n'oge okpomọkụ, ọnọdụ okpomọkụ ebiliwo nke ukwuu, ọchịchọ nke ọkụ eletrik arịwo elu, nke kpalitere ọnụahịa nke coal ọkụ. ibili. N’abalị iri abụọ na anọ nke ọnwa Juun, ọnụ ahịa ebe a na-ere ere n’ọkụ bụ yuan 990. / Ton, na ọkwa dị elu n'afọ. Ọnụ ego ọkụ ọkụ siri ike ga-eme ka ọnụahịa mmepụta nke aluminom electrolytic dịkwuo elu, nwekwaa nkwado n'okpuru ọnụahịa aluminom.
Ndepụta Ngwaahịa na-aga n'ihu ịjụ, a na-anabata nnabata ala
Oriri nke electrolytic aluminium na-elekwasị anya na ulo oru dika ezigbo ala, ugbo ala na ngwa ulo. Site na echiche data, arụmọrụ nke mpempe akwụkwọ data nke ala na-aga n'ihu na-akawanye mma, mmụba nke afọ ụgbọala na data ahịa ka dị oke. Ngwa ụlọ ejiwo ọnụego afọ na-eto eto nke afọ na mmepụta, ahịa na mbupụ. Enwere ike ịhụ na mmụba afọ na afọ nke data dị mkpa nke ụlọ ọrụ aluminium alụọla. Nke a na-egosi na ụlọ ọrụ ndị a ji nwayọ na-ewepu mmetụta dị ala nke ọrịa ahụ kpatara n'otu oge ahụ n'afọ gara aga, mana ha na-eji nwayọ nwayọ alọta ọnụego afọ ọ bụla n'afọ. Ọ ka na-ewekwa oge. Ya mere, n'ime oge dị mkpirikpi, a na-atụ anya na njedebe nke aluminom ga-anọgide na-adị mma.
Ọrụ ndị a dị n'elu bụ mkpa ọdịnala niile maka aluminom. N’afọ a, ka mmata ndị mmadụ na echekwa gburugburu ebe obibi jiri nwayọ nwayọ, ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ a na-enweta elebara anya karịa. Ulo oru dika ugbo ala ohuru, fotovoltaics, na ike ikuku na ebili. Energygbọ ala ndị ọhụrụ na-agbaso ịdị arọ dị mfe, yabụ aluminom na-eme ahụ ha n'ozuzu. Eku nke mkpụrụ ndụ fotovoltaic bụ nke aluminom alloy. A na-ejikwa Aluminom n'ọtụtụ akụkụ nke ikuku ikuku nke na-emepụta electrophoresis. Na mkpokọta, amụma "carbon neutral" ọ bụghị naanị na-egbochi usoro nke itinye ikike nrụpụta nke electrolytic, kamakwa ọ na-agbasawanye ebe ndị na-eri nri nke electrolytic aluminum.
N'ihe banyere ngwakọ nke mmekọrịta mmadụ na ibe, dịka nke June 24, dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, nchịkọta mmekọrịta nke aluminom electrolytic na ebe ise bụ tọn 874,000, mbelata nke 16,000 tọn site na izu gara aga. Ndepụta Ngwaahịa n'otu oge ahụ n'afọ gara aga bụ tọn 722,000. Ngwaahịa dị ugbu a dị na ọkwa 3rd kachasị dị ala n'otu oge nke afọ 5. Ihe odide ala nke ọdịnihu na-egosipụtakwa ezigbo ọnọdụ dị ugbu a nke ọkọnọ aluminom na mkpa.
Ọnụ aluminom na-adị ike. Na mgbakwunye na mmetụta nke ya, ọ nwekwara mmekọrịta ụfọdụ yana oke mmiri ofesi. N'ịbụ ndị ọrịa ahụ metụtara, United States ewepụtala usoro amụma mkpali akụ na ụba kemgbe ọnwa mbụ nke afọ a. Mmiri mmiri zuru ụwa ọnụ ezuola. Ọ bụ ngwaahịa nwere ọnụego ụwa. Yabụ, na enweghị ego, ọnụahịa aluminom ga-ebuli elu. Agbanyeghị, ike ngwaahịa na-aga n'ihu na ọkara nke afọ a emeela ka ọnụ ahịa mmepụta nke obere ụlọ ọrụ obere na nke pere mpe mekwuowanye, uru ha abawokwa. Ọnọdụ a adọtawo ndị isi nke ndị nlekọta. Bido n’abalị iri na abụọ nke Mee, ndị isi na-ahụ maka ọrụ ha ekwuola ọtụtụ ugboro gbasara mkpa ọ dị ịchekwa ngwaahịa na ọnụ ahịa kwụsiri ike, na nnukwu ngwa ahịa agbakeela.
Na nchịkọta, "nnọpụiche carbon" na "carbon peaking" ọ bụghị nanị na-egbochi ntọhapụ nke ikike mmepụta electrolytic aluminium, kamakwa mụrụ mkpa ọhụrụ maka aluminom electrolytic. Ka ọ dị ugbu a, ngwongwo nke aluminom electrolytic ka dị ala ma a na-anabata ihe ndị bụ isi. A na-atụ anya ọnụahịa Aluminom Oge dị mkpụmkpụ na-adị ike, anyị na-echekwa ma akara 19200 nwere ike ịgbaji ọzọ. A na-atụ aro ka ụlọ ọrụ ndị dị mkpa na-arụ ọrụ dị mma na njikwa ihe egwu, n'otu oge ahụ, a na-atụ aro ka ị attentionaa ntị na iwu ndị dị mkpa nke ndị na-achịkwa iwu na-achịkwa iji hụ na ọkọnọ ma kwụsie ike.